गरिमा विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौंमा - Karobar National Economic Daily
गरिमा विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौंमा
query_builderJuly 8, 2017 7:59 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility363
काठमाडौं, २४ असार (कास) – पोखरालाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको गरिमा विकास बैंकले काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गरे।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधनगर्दै गर्भनर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजीपुर्याउने बाटोमा बैंक अघि बढेको भन्दै खुसीव्यक्त गरेका थिए । उनले अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथावित्तीय संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा जोड दिने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कमाउनका लागिमात्र सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै उनले त्यस्तो मानसिकता राख्ने सबै बैंकका सञ्चालकहरुलाई अन्य नाफामुलक व्यवसायमा लाग्न सुझाव पनि दिए ।
कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले सेवाग्राहीलाई उत्कृट वित्तीय सेवा सहज रुपमादिन बैंकले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताए ।
पोखराबाट काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा आफ्नो मुख्यकार्यालय स्थानान्तरणको सबै प्रकृया पुरा गरि गत चैत २७ देखि लाजिम्पाटबाट बैंकले अनौपचारिक रुपमासेवा सुरु गरेको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को यस अवधिसम्म बैंकले १३ अर्ब ९५ करोड रुपैंया निक्षेप संकलनतथा १२ अर्ब ९० करोड रुपैंया कर्जा प्रवाहगरि ४२ करोड १६ लाख संचालन आम्दानी गरेको छ । केही समय अघिमात्रै १० बराबर ७ (१०ः७)को अनुपातकाहकप्रद शेयर निष्काशन गरेको बैंकको हालको चुक्तापूँजी २ अर्ब १६ करोड ९६ लाख ५१ हजार ६ सय ९ रुपैंया रहेको छ ।
यसै बिच बैंकले शुक्रबार नै चाबहिलमाआफ्नो शाखा समेत बिस्तार गरेको छ ।
बैंक तथा बित्त.